10 ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်များ
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 08/01/2021)
စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးမိသားစုအားလပ်ရက်များထဲမှတစ်ခုမှာဥရောပရှိအကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများထဲမှစိတ်လှုပ်ရှားစရာခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ပြင်သစ်မှာသာ, သငျသညျရှိသည်လိမ့်မယ်3အံ့သြဖွယ်ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများ, ငါတို့လက်ကိုရွေးလိုက်တယ် 10 သင်၏နောက်မိသားစုခရီးစဉ်အတွက်ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးဥယျာဉ်ခြံများ. ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး rollercoaster စီး, ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်သစ်တောများ, မှော်မြေများ, နတ်သမီးပုံပြင်, နှင့်အချိန် - ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု, မင်းကိုစောင့်နေတယ်, ပြင်သစ်မှသြစတြီးယားနှင့်ဗြိတိန်သို့.
1. Rust ဂျာမနီရှိ Europa-Park
ဂျာမနီရှိအကြီးဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ, Europa ဆောင်ပုဒ်ထက်ပိုပါတယ် 100 ဆွဲဆောင်မှု. Europa-Park သည်ဥရောပ၏ဒုတိယအကျော်ကြားဆုံးဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်, ပဲရစ်ရှိ Disneyland ပြီးနောက်. သင့်ရဲ့ကလေးတွေက rollercoasters ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သူတို့အပေါ်တစ် ဦး ပေါက်ကွဲမှုရပါလိမ့်မယ် 13 ပန်းခြံအတွင်းရှိ rollercoasters.
မင်း Strasbourg ကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်အနည်းဆုံးစီစဉ်သင့်သည်2Europa-Park အတွက်ရက်ပေါင်း. ဤသည်ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုများ၏အရေအတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်, နှင့်အပိုဆောင်းစိတ်ကူးပြပွဲ. အငယ်ဆုံးသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော elf စီးခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်, နှင့်ပြိုင်ကားမောင်းသမားအယောင်ဆောင်ဘို့ Big-Bobby-Car circuit ကို, အဟောင်းတွေကလေးတွေနှင့်မိဘများအိုက်စလန်ရှုခင်းရှိ Blue Fire Mega coaster ပေါ်တွင်လွင့်မျောသွားလိမ့်မည်.
ထို့အပြင်, သင်အမှန်တကယ်ရှည်လျားသောခရီးစဉ်စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်က On-site ကိုဟိုတယ်များတ၌တည်းခိုနိုင်ဘူး. ဤနည်းဖြင့်သင်သည်ဥရောပပန်းခြံသို့သင်အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အများဆုံးရောက်နိုင်သည်, အပေါငျးတို့သ themed- ဒေသများတွေ့ကြုံခံစား: အာဖရိကရှိ Adventureland မှ Grimm ၏ထူးဆန်းသောသစ်တောအထိ.
Europa-Park အကြောင်းပါ3Frankfurt ကနေနာရီ, သင်ကရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် မီးရထားခရီးသွားလာ ဂျာမနီကိုဖြတ်ပြီး Ringsheim ရန်. ထိုအခါ, သင်ကားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားလွှဲပြောင်းငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်.
တစ်ရထားနှင့်အတူ Frankfurt မှ Cologne
မြူးနစ်သည် Frankfurt သို့တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ
Frankfurt ကို Hanover ရထားနဲ့သွားမယ်
မီးရထားနှင့်အတူ Frankfurt သို့ဟမ်းဘတ်
2. Disneyland Paris ပြင်သစ်
ဒါဟာဖြစ်ကောင်းငါတို့အပေါ်အကျော်ကြားဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံပါပဲ 10 ဥရောပရဲ့စာရင်းအကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ, ပဲရစ် Disneyland အသက်အရွယ်မရွေး visitors ည့်သည်များအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ All- အချိန်အကြိုက်ဆုံးဒစ္စနေးပုံပြင်များမှချစ်စရာကောင်းဇာတ်ကောင်, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း millions ည့်သည်သန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်.
Disneyland သည် Chessy မြို့တွင်ရှိသည်, ပြင်သစ်မှာ. ဒါဟာ Walt Disney စတူဒီယိုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုပန်းခြံ၏မူလနေရာဖြစ်သည်, ဘယ်နေရာမှာသင်တစ် ဦး ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်သို့ခြေလှမ်းနိုင်ပါတယ်, ပြီးတော့မင်းရဲ့ကလေးဘဝအိပ်မက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတယ်. ဝေါ့ဒစ္စနီကမ္ဘာသည်အသက်ပြန်ရှင်လာသည်, အံ့သြဖွယ်ဆွဲဆောင်မှု၌တည်၏, နှင့်အဲလစ်ရဲ့ labyrinth နှင့် Mickey ရဲ့ 4D ပြပွဲနဲ့တူပြသထားတယ်.
သငျသညျတစျခုလုံးကိုတနင်္ဂနွေမှဒီမှော်တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်, နှင့်ဒစ္စနေးဟိုတယ်များမှာနေပါ, သို့မဟုတ် Disneyland မှအဝေးပြေးခရီးစဉ်သာဖြစ်သည်.
ဒစ္စနေလန်းသည်တရားမျှတသည် 20 ပဲရစ်ကနေမိနစ်ကွာ. ဒီကိုဒီမှာပဲရစ်လေဆိပ်ကနေတိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ် Marne-la-Vallee / Chessy ရထားဘူတာ.
3. သြစတြီးယားတွင်ဗီယင်နာ Prater Theme Park
Prater Wien သည်သြစတြီးယားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်, နှင့်တ ဦး တည်း 10 ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများ. သင့်မိသားစုသည်ရိုင်းပျသော rollercoasters များ၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချိန်ကိုရရှိလိမ့်မည်, နှင့်ကို virtual reality ဆွဲဆောင်မှု, ဒေါက်တာ. Archibald.
ဖြည့်စွက်ကာ, သွား - လှည်းရှိပါတယ်, သရဲခြောက်တဲ့ရဲတိုက်တွေ, ထိုသို့အားလုံးချွတ်ထိပ်ဆုံးရန်, သြစတြီးယားအတွက်iantရာ Ferris ဘီး. ဤခမ်းနားသောကူးတို့ဘီးကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖွင့်လှစ်ထားပြီးတစ်စီးဖြစ်သည် ဗီယင်နာရဲ့ထိပ်တန်းအထင်ကရနေရာများ.
ဗီယင်နာရဲ့ Prater Theme ပန်းခြံသို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ?
The Prater အပန်းဖြေဥယျာဥ် ဗီယင်နာရဲ့ 2nd ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်, ပြီးတော့ဒါကိုတက္ကစီဒါမှမဟုတ်မြေအောက်ရထားနဲ့သွားနိုင်ပါတယ် မြို့လယ်ကနေ.
4. Gardaland အီတလီ
သင်မှန်းဆခဲ့ကြလိမ့်မယ်အဖြစ်, Gardaland သည်အီတလီရှိ Garda ရေကန်အနီးတွင်တည်ရှိသည်. ရေနားမှာတည်ရှိပြီးသောဥယျာဉ်ခြံဥယျာဉ်အဖြစ်, အဆိုပါ Gardaland ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံအများအပြားပျော်စရာရေစီးရှိပါတယ်, ကော်လိုရာဒိုလှေလိုပဲ, နှင့်တောတွင်း Rapids.
ဖြည့်စွက်ကာ, အဆိုပါ Gardaland လည်းသင်တန်းတစ်ခုပင်လယ်ဘဝငါးမွေးကန်ရှိပါတယ်, ၏ 13 ရေးရာဒေသများ, နှင့် 100 မျိုးစိတ်. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်, သင့်ရဲ့ကလေးတွေဟာပင်လယ်အောက်မှာလုံးဝကိုစွဲမက်လိမ့်မယ်, နှင့်အစဉ်အဆက်စွန့်ခွာချင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်, သင်တို့ရှိသမျှသည် adrenaline အကြောင်းကိုမှန်လျှင်, ထို့နောက်သင်သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပြာရောင်လေဆင်နှာမောင်း rollercoaster ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်.
Gardaland Theme Park သို့သွားရန်?
Vrenice မှ Peschiera del Garda ဘူတာသို့ Trenitalia ရထားကိုသင်စီးနင်းနိုင်ပါသည်, ထို့နောက် Gardaland မှလွန်း.
5. Efteling Park နယ်သာလန်
ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ Efteling တစ်ခုဖြစ်သည် 10 ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများ. ငါတို့ရှိသမျှသည်ပေါ်ကြီးပြင်းလာတဲ့ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် Efteling ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေ၊, Hans Christian Andersen မှသည် Grimm မှညီအစ်ကိုများ.
Fata Morgana သည်သင့်အား Far East နှင့် Sultans နိုင်ငံများသို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်, ရေအောက်ကြမ်းပြင်နှင့်ရေငွေ့စက်များသည်သင့်အားစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ထက်ကျော်လွန်ပါလိမ့်မည်. နတ်သမီးပုံပြင်လောကကမင်းကိုစောင့်မျှော်နေတယ် လှေစီး မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Droomvlucht ၌တည်၏.
မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် Efteling ဆောင်ပုဒ်၏မှော်အတတ်ကိုဖော်ပြရန်မည်သည့်စကားလုံးမျှလုံလောက်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါကြောင့်သင်နယ်သာလန်ရှိသင်၏အားလပ်ရက်၌ဤဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံအတွက်အချိန်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားရမည်.
Theme Park ဥယျာဉ်မှူးသို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ?
အမ်စတာဒမ်မှ H s-Hertogenbosch သို့သင်ရထားစီးနိုင်သည်, ထို့နောက် Efteling ဆောင်ပုဒ်သို့တိုက်ရိုက်ကားစီးပါ.
6. ဝင်ဆာဗြိတိန်ရှိ Legoland Theme Park
အားလုံးဆွဲဆောင်မှုလုံးဝ Lego လုပ်သောအခါ, ဒီဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံဟာကလေးများအတွက်နောက်ထပ်ပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်သည်. Windsor ရှိ Legoland ဆောင်ပုဒ်သည် Lego ကစားစရာစနစ်တစ်ဝိုက်ရှိကလေးများအတွက်ဖြစ်သည်.
ထိုကွောငျ့, တိုင်းတစ်ခုတည်း rollercoaster, လှေ, နှင့်ရထားကြီးမား lego အပိုင်းပိုင်း၏ထွင်းထုထားသည်. ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အင်္ဂလန်ရှိပန်းခြံဥယျာဉ်ဟာ Berkshire မှာတည်ရှိပြီး London မှနာရီဝက်သာကွာဝေးသည်.
Windsor ရှိ Legoland Theme Park သို့သွားရန်?
London Paddington ကနေ Windsor ကိုသွားသင့်တယ် & ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူအီတန်ဗဟို, သို့မဟုတ်လန်ဒန် Waterloo ကနေတိုက်ရိုက်ရထား. ထိုအခါ, ရထားဘူတာတစ်ခုစီမှ Legoland သို့ဘတ်စ်ကားများရှိပါသည်.
7. ပြင်သစ်တွင် Asterix Theme Park
အမှု၌သင်တို့ကိုငါမသိရ, Parc Asterix သည် Albert Uderzo နှင့် Rene Goscinny ၏ကျော်ကြားသောရုပ်ပြစာအုပ်များအပေါ်အခြေခံသည်, Asterix. ထိုကွောငျ့, နီးစပ်သူ2သန်းပေါင်းများစွာသော France ည့်သည်များသည်ပြင်သစ်ရှိဒုတိယအကြီးဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ၏အံ့ဖွယ်များကိုနှစ်သက်ကြသည်. ပထမ ဦး ဆုံးသင်တန်း၏မှော် Disneyland ဖြစ်ပါတယ်.
Asterix ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံတွင်သင် Discobelix သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအချိန်ကိုတွေ့နိုင်သည်, Village Gaulois ရှိလင်းပိုင်နှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း, နှင့်သင်တန်း၏အခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုပျော်မွေ့.
Asterix ဆောင်ပုဒ်သည်သာဖြစ်သည် 30 Paris Gare du Nord မှ RER ရထားပေါ်တွင်လိုင်း B မှပဲရစ်မှမိနစ်ပိုင်း. ထို့နောက်သင်သည် Charles de Gaulle မှထွက်ခွာသည် 1 လေဆိပ်, နှင့်ပန်းခြံလွန်းပျံသို့ ဦး တည်.
8. ပြင်သစ်တွင် Futuroscope ပန်းခြံ
စက်ရုပ်နှင့်ကခုန်, အချိန်ခရီးသွား, နှင့်မှခရီးသွားလာ4မြင့်သောမြေကြီး၏ထောင့်၊, Futuroscope ဆောင်ပုဒ်သည်ဤကမ္ဘာမှထွက်သည်. ဤအံ့ဖွယ်ကောင်းသောပန်းခြံသည်ပြင်သစ်ရှိလှပသော Nouvelle-Aquitaine ဒေသတွင်တည်ရှိသည်.
Futuroscope Theme Park သို့သွားရန်?
Eurostar မှထူးခြားသော Futuroscope ဆောင်ပုဒ်သို့ Lille သို့မဟုတ် Paris သို့သွားနိုင်သည်, နှင့် TGV သို့ပြောင်းလဲပါ.
9. ယူကေရှိ Adventures Theme Park ၏ Chessington World
ယူကေရှိ Chessington World of Adventures သည် Safari-themed park တစ်ခုဖြစ်သည်. ဆိုလိုသည်မှာ Chessington အပန်းဖြေဥယျာဉ်သို့မိသားစုမည်သည့်အလည်အပတ်ခရီးကိုမဆိုတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အာဖရိကတစ်လွှားရှိထူးဆန်းဆန်းဆန်းပြားသည့်စွဲမက်ဖွယ်ကမ္ဘာသို့မိသားစုစွန့်စားမှုတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုဆိုလိုသည်။.
ရိုင်းစွန့်စားမှုအပြင်, Safari နှင့် Azteca တို့တည်းခိုသောဟိုတယ်များတွင်တည်းခိုနိုင်သည်, နှင့်သင်၏နေထိုင်တိုးချဲ့. ဒါကြောင့်, သင်ရိုင်းစွန့်စားမှုသို့ရောက်လျှင်, ဥယျာဉ်ကိုဖြတ်ပြီးတောထဲမှာသွားတဲ့လမ်းလျှောက်သူတွေကိုသင်အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်, ကျားကျောက်, နှင့်မြစ်ဖောင်.
Chessington ၏စွန့်စားမှုကမ္ဘာသည်စွန့်စားသောမိသားစုအတွက်ရည်ရွယ်သည်, သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုအချိန်ယူရလိမ့်မည်.
စွန့်စားမှုများ Chessington ကမ္ဘာကြီးသို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ?
Chessington ရိုင်းဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံသည် 35 လန်ဒန်အလယ်ပိုင်းမှရထားဖြင့်မိနစ်ပိုင်း. ဒါကြောင့်, အနောက်တောင်ရထားလမ်းကို Waterloo မှ Chessington South station အထိသွားနိုင်သည်.
10. ဂျာမနီရှိ Fantasialand Theme Park
Fantasialand အတွက်အားလုံးသားသမီးရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အတွက်စစ်မှန်တဲ့လာကြ၏6ခမ်းနားကမ္ဘာ. ကမ္ဘာအနှံ့မှာ, သငျသညျအရှိဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာစီးပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ်, အလင်းရောင်နှင့်အရောင်အဆင်းတို့.
ဒါကြောင့်, အဘယ်အရာကို Fantasialand ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများထဲမှစေသည်? တရုတ်မြို့, မက္ကစီကို, အာဖရိကတိုက်, ဘာလင်, Wuze မြို့, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေနိုင်ငံ, နှင့် Rookburgh, တိုင်းကမ္ဘာအတွက်အံ့သြဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတူ. Black Mamba မှသည်ကျော်ကြားသော Taron အထိဖြစ်သည်, ဒီစီးနင်းမှုများကသင့်ကိုဝေးဝေးမှုတ်ထုတ်လိမ့်မည်.
Bruhl မီးရထားဘူတာရုံကနေသင်ထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်. Fantasialand သည် Bruhl တွင်တည်ရှိသည်, Cologne ကနေ 2o မိနစ်.
ဒီပျော်စရာတက် Sum ရန်, ဥရောပ၏အတောက်ပသောစိတ်များသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဥယျာဉ်များဖန်တီးခဲ့ကြသည်. သင်သည်ကလေးငယ်များနှင့်အတူခရီးသွားနေခြင်းသို့မဟုတ်ကလေးငယ်များအားစွန့်စားမှုတစ်ခုအတွက်ယူဆောင်ခြင်းရှိမရှိ, အဆိုပါ 10 ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းရှိအကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများသည်အသက်အရွယ်မရွေးအကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများရှိသည်.
ဒီမှာ Save A ရထားမှာ, သင်၏ခရီးကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် “10 ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်များ”.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာပန်းဥယျာဉ် ၁၀ ခု” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-theme-parks-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အကောင်းဆုံး မိသားစု OutdoorActivities ကွမ်းခြံကုန်း ပုသိမ် ရထားခရီးသွား ။